Continuous method for solving Boundary Value Problem (BVP) - Open Engineering For Myanmar
Home » mtssnrty » သင်္ချာ
» Continuous method for solving Boundary Value Problem (BVP)
Continuous method for solving Boundary Value Problem (BVP)
ဒီတစ်ခါတော့ စာဖတ်သူများကို ဘလောက်ဂါ အသစ်တစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာပါ။ သူ့စာတွေ က အဆင့်မြင့်တဲ့ အတွက် အချို့ တွေ အတွက်တော့ ဖတ်ရတာ နဲနဲ အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ တန်ဖိုး အရမ်းကို ရှိပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ အီကွေးရှင်းတွေ များနေလို့ ပီဒီဖက် နဲ့ ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တန်း သေသေချာချာ ဖတ်ချင်သူများအတွက် ကိုတော့ ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပြီးမှ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။
mintheinoo - UploadaDocument to ScribdRead this document on Scribd: mintheinoo Please Share This Post Share on Facebook
အကိုရေ.... စာအရေးအသားကလည်း ကောင်း၊ ရှင်းပြထားတာလည်း ကောင်းလို့ နားလည်လည်း လွယ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အကို့ရဲ့ ပို့စ်တွေကိုလည်း ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ် အကို။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Fourier transform, Обобщенные финитные функции, Dirac delta function တွေအကြောင်း သင်ယူလေ့လာချင်ပါတယ်။ အကို အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ရှင်းပြပေးပါ။ လေးစားအားကိုးစွာဖြင့်
hi mymetro I am so sorry for late reply. I am now so busy with my research. But I wanna suggest to you. If you use matlab, there arealot of m file functions to solve fourier transform. Try to use that functions. eg. guest this site http://math.la.asu.edu/~kawski/MATLAB/matlab.html. You can use this functions with no worry. Sometimes, using functions by others authors is more convenient for time than trying to write. In here, you should use funs of reliable authors. wish you all the best! mtssnrty